Mareykanka: Madaxweyne Ku-xigeenkii hore ee Joe Biden Dood-tilmaameedka Dimoqraadiga - TELES RELAY
ACCUEIL » SIYAASADDA Mareykanka: Madaxweyne Ku-xigeenkii hore ee Joe Biden Democratic Nomination Contestant
Madaxweynihii hore Joe Biden, 76, ayaa ku dhawaaqay dalabkiisa ku aaddan tartanka madaxweynaha ee 2020 ee Twitter. Waxa uu muddo dheer ku mashquulsanaa inuu noqdo musharax, laakiin weli waa ka hor doorashada. Si ka duwan inta badan tartamayaashiisa Democratic, wuxuu difaacaa siyaasad siyaasadeed oo badan.
Dad yar ayaa ogyahay qarsoonaanta awoodda Washington iyo sidoo kale isaga. Lix shuruud sida senator iyo laba madaxweyne ku xigeenka Madaxweyne Barack Obama, taas oo ka dhigaysa sanado 44, noloshii nuska ahayd, oo u dhexeeyey Capitol iyo Aqalka Cad. Wuxuu ku dhashay Scranton, Pennsylvania, oo ku biiray qoyska dhexe, Joe Biden wuxuu ahaa 29 oo keliya markii uu ku biiray Senate-ka 1972. Wuxuu markaas matalayay Gobolka Delaware.
Khamiistii, wuxuu ku codeeyeen musharaxnimadiisa isagoo fariin u diray isaga oo aan loo magacaabin madaxweyne Trump: " Qiimaha aasaasiga ah ee qarankan, darajadeena adduunka, dimoqraadiyadeena, dhammaanba waxay sameysey Mareykanka, taasina waa sababta aan u sharaxay musharaxnimadayda madaxweynaha Mareykanka ".
Musharixiin caan ah xittaa ka sii baxsan doorashada dimoqoraadiyadeed
Si dhakhso ah, Joe Biden waxaa loo yaqaanaa xildhibaan aad u adag, oo xiisa badan leh oo xiriir la leh oo jecel inuu hadlo, sida badan qaar ka mid ah. Sidaa daraadeed, sumcad kale ayaa ka heshay saraakisha golaha guurtida iyo kadibna dibedda diblumaasiyadeed: taas oo ahQofka wax dilaya wuxuu noqon karaa ikhtiyaari.
Joe Biden waxa uu leeyahay caasimad caan ah sida siyaasiyiin yar oo ku yaala Washington, kaas oo aad uga fog dhinacyada khilaafyada. Dhammaan America waa la taabtaa marka ay ka barato 2015 dhimashada wiilkeeda Beau, kansar maskaxda.
Muslimiintaan shakhsi ahaaneed, oo ah kan labaad ee noloshiisa, markii uu lumiyay gabadhiisa koowaad iyo gabadhiisa shil baabuur, waxay leedahay cawaaqib siyaasadeed: Joe Biden ayaa diidday wakhtigii uu bilaabi lahaa tartanka madaxweynaha, wax badan oo uu ka qoomameeyay taageerayaashiisa oo haatan aad ugu faraxsan in uu dib u eegay booskiisa.
Maqaalka Isha: http://www.rfi.fr/ameriques/20190425-old-vice-president-joe-biden-lance-course-investiture
Taasi waa sababta Me Ndoki diiddo in ay tagto maxkamad Khamiistii - CAMEROON MAGAZINE